Hakan Larsson /”ore Properties”: Ụgha akwụkwọ Migration Board, indented F-tax na ọhụrụ ụlọ ọrụ aha | Holmbygden.se
Ihe na 28 November, 2015 site Holmbygden.se
Ọ bụ ugbu a na-akwadebe feverishly ka ọ bụla oge na-enweta ndị gbara ọsọ ndụ na Stendahls skandalhus. Mgbe na-eto eto asịrị na ụfọdụ ga-anọgide na na ọhụrụ nwe Hakan Larsson si Orebro, ugbu a na-ekwenyere ndị mmadụ Stendahs. Mgbe denials nke njikọ Johan Stendahl ekpughere Swedish Television News Västernorrland, ya apụta ugbu a, ọtụtụ ọhụrụ obi abụọ:
Ụgha asambodo zitere arịrịọ ka Migration Board.
Ọzọ, mgbanwe nwe aha.
Indented F-tax Hakan Larsson ụlọ ọrụ.
Ghara Ụgha banyere na kọntaktị na obodo sports club.
Enweghị na-eme atụmatụ ikike / ụlọ ikike maka mgbapu ulo.
Fake akwụkwọ arịrịọ na Migration Board
Hakan Larsson na Johan Stendahl ikpe ndụmọdụ ọkàiwu Michael Sterner osụk ụgha ventilashion akwụkwọ nke Njirimara i Anundgård na ha ọnụ ekwegasịrị na Migration Board nweta ihu ọma. The ventilashion njikwa si a ụlọ ọrụ enweghị F tax na enweghị nzere ntozu maka nnyocha. Ulo Njirimara echegbu nwekwara ike ịgba akaebe ọ bụla soja mgbe ọbụna kemgbe n'ụlọ ha nke kwuru nyochara ogbugba ndu.
Michael Sterner dị ka Stendahl ka nwekwara 2013 mgbe ọbụna mgbe osụk ụgha akwụkwọ maka ụlọ ọkụ nchebe na Migration Board. Ọ dị ka Rescue Medelpad mgbe ezi doro anya na ụgha.
Ọzọ, mgbanwe nwe aha – bụghị “ore Properties”
Dị nnọọ na oge maka ị nweta nke mgbapu ulo 2013 mgba ọkụ “Stendahl skandalhus” nwe a ọhụrụ na akwụkwọ “mgbazinye” ụlọ ọrụ – Aros Energy declarations ekesịpde ihe mmata nke Johan Stendahl. N'otu aka ahụ, ọ bụ ikpeazụ oyi mgbe ọzọ mmata nke Stendahl, Hakan Larsson zụtara Njirimara. Hakan Larsson were, Otú ọ dị, mgbe ndị Aros Energy ndịa na Johan Stendahls ọkikpe dị ka ọbụ director.
Ugbu a renamed, Otú ọ dị, site Hakan Larsson Bilkonsult AB ore Fastigheter AB. Ọ bụrụ na ihe kpatara ya bụ na Hakan Larssons njikọ Stendahl ekwuchi edoghị.
Indented F tax
Mgbe ichekwa n'aka akụkọ ihe mere eme, ụgwọ na enweghị ngosipụta ugbu a Skatteverket ada na F-tax Hakan Larsson ụlọ ọrụ Aros Energy declarations. Ọ bụ ezie na nke a bụ Johan Stendahls ọka iwu Michael Sterner ndị na-anọdụ na Board.
Trock det, niile gara aga rejections site ndị Ọrụ Immigrashọn na njikọ na Johan Stendahl, ikpe Swedish State a ụzọ n'ụzọ anọ nke otu ijeri, nweta Hakan Larsson Bilkonsult si Orebro banye nkwekọrịta na Swedish Migration Board na-emeghe mgbapu ulo asịrị ụlọ.
Ghara Ụgha banyere na kọntaktị na obodo sports club
Mgbe Hakan Larsson ga-akọwa na mgbọrọgwụ ya na Holm, o dere na ya mere na kọntaktị na obodo egwuregwu klọb. Nke a megidere Holm Sportklubb, mgbe onye ọ bụla nke a na-aka banyere ihe ọ bụla mgbapu ulo. Ma ọ bụ na ozi ọ bụla na-ekwurịta okwu ndị obodo ma ọ bụ okwu nkowa haziri.
Enweghị atụmatụ ikike / ụlọ akwụkwọ ikike
Ọ dịghị ụlọ akwụkwọ ikike maka ọrụ nke mgbapu ulo na ya Njirimara. Nọmalị chọrọ atụmatụ ikike ma ọ bụ ụlọ ngwa mgbe mgbanwe nke ojiji nke a ụlọ, ya bụ, mgbe ị na-aga site na otu ọrụ ọzọ.
Gbara Ọsọ Ndụ Ulo bi ọnụ na ndị ọzọ ha na-amaghị ga-izute chọrọ nke Building Regulations maka eme.